Maxaa ka soo baxay kulankii Madaxweynayaashi hore iyo Guddoonka Labada Aqal ? | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Maxaa ka soo baxay kulankii Madaxweynayaashi hore iyo Guddoonka Labada Aqal ?
Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo hoggaamiya Madasha Xisbiyada Qaran ee mucaaradka ah ayaa shalay kulamo gaar gaar ah la qaatay Guddoomiyeyaasha labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan iyo Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Kulanka koowaad ayay Madaxda Madasha la qaateen Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan, kaasoo ka dhacay hoyga Guddoomiyaha oo ku dhow agagaarka Madaxtooyada.
Ilo ku dhow dhow kulanka ayaa sheegaya in Madaxda Madasha Xisbiyada Qaran ay u gudbiyeen Guddoomiye Mursal farriin ku aadan mowqifka Madasha ee ku aadan doorashada, iyagoo ka dalbaday Guddoomiyaha in farriintan gaarsiiyo Madaxweynaha.
Fariinta ayaa aheyd mowqifkooda doorashada dalka in waqtigeeda ku dhacdo, oo aanay aqbali doonin in hal maalin dib u dhacdo, doorka Baarlamaanka ee arrintan kaga aadan, in la helo doorasho la isla ogol yahay oo saamileyda siyaasadda qeyb ka yihiin.
Guddoomiye Mursal ayaa sheegay in farriintan uu gaarsiin doono Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha, wixii uu kala soo kulmana uu dib ula soo wadaagi doono.
Intii uu socday kulanka Madaxweynayaashii hore iyo Guddoomiye Mursal ayaa waxaa si kala gaar gaar ah Taleefanka Guddoomiyaha u soo wacay Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Kheyre, waxaana ay ka codsadeen Guddoomiye Mursal inuu taleefanka ugu dhiibo Madaxweyanayaashii hore, si ay ula hadlaan, waxaana kaddib Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha la hadleen Madaxdii hore, iyadoo ay dhex martay Sallaan iyo sheeko kooban.
Dhinaca kale waxaa maanta la filayaa in Madaxda Madasha Xisbiyada Qaran ay shir jaraa’id kaga hadlaan xaalada dalka, doorashada iyo kulankii ay la qaateen Guddoonka Labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, iyadoo mar kale Madasha Xisbiyada Qaran ku celin doonaan mowqifkooda ku aadan doorashada iyo nooca ay suurta galka tahay inay noqoto oo ah mid la isla ogol yihiin dhammaan saamileyda siyaasadda.
Madaxweyne Farmaajo ayaa ku dhegan Doorasho uu sheegay inay ku dhaceyso waqtigii loogu talogalay oo dadweynaha Soomaaliyeed ka qeybgeli doonaan, wuxuuna arrintaasi qabaa inay go’aankeeda leeyhiin xildhibaannada Baarlamaanka Federaalka oo kaliya.
Maxaa ka soo baxay kulankii Madaxweynayaashi hore iyo Guddoonka Labada Aqal ? was last modified: June 8th, 2020 by Admin
Maxuu yahay heshiiska caalamiga ah ee maanta lagu ansixiyey shirkii golaha wasiirrada?
Waa Kuma Abwaan Maxamed Xasan Cusmaan (An Jeex).